Fikambanan-jiolahy :: Roa lahy noraisim-potsiny teny Ambatobe • AoRaha
Fikambanan-jiolahy Roa lahy noraisim-potsiny teny Ambatobe
Avy hatrany dia nampiondrehin’ireo pôlisy nanao fanamiana sivily efa nivonona tamin’izay mety mitranga ireto lehilahy roa voalaza fa jiolahy mpanao fanafihana tra-tehaka teny Ambatobe, afak’omaly. Voatondro ho naman’ireo jiolahy nifanenjehana teny Behoririka, tamin’ny alarobia hariva lasa teo, izy ireo ary ahiana ho isan’ireo nanafika Sinoa teny amin’ny lalana Marais Masay, vao tsy ela akory izay, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny Pôlisy misahana ny heloka bevava na ny BC, manao famotorana momba ity raharaha ity.
Toy ireny tamin’ny horonantsary ireny ny zava-nisy teny Ambatobe, afak’omaly tolakandro tokony tamin’ny 4 ora. Avy hatrany dia hambana basy sy baiko nampiondrika an’ity andian-dehilahy no hitan’ny rehetra.
“Noheverinay fa ny mpiambina ireo mpianatra tao amin’ny sekoly lehibe teny an-toerana no nanao fihetsiketsehana, nahiana ho fikasana fakàna an-keriny. Nanao fanamiana sivily avokoa ireo mpitandro filaminana nanambana basy sy ireo olona nosamborina. Minitra vitsy taorian’izay vao tonga ny fiaran’ny pôlisy. Nampiakarin’izy ireo tao anaty fiara ireo olona roa”, araka ny fitantaran’ny olona nanatri-maso ny zava-nisy. Milaza ny mbola mikaroka olona hafa isan’ireo mpikambana ao amin’ity andian-jiolahy ity ny BC.
Fanenjehana mpanao ratsy :: Lehilahy voalaza fa jiolahy maty voatifitra tetsy Andohantapenaka